I-China Postpartum Ice Pack mveliso kunye nabenzi | Huanyi
Iipakethi zeGel yokuNceda uPeineal Hemorrhoid
I-29.5 * 7.5cm, i-220g, imikhono ethambekayo enokuhlanjwa kunye neepakethe zentsimbi zejel, ezinokunceda emva kwentlungu yokubeleka
Unyango olubandayo luyanciphisa ukudumba kunye nokurhawuzelela, lubonelele ngoncedo olukhawulezileyo. Oku kukhuthaza ukuphiliswa kokubeleka, ukukrazula kwilungu lobufazi kunye nokuthunga, utyando, hemorrhoids, ukopha, usulelo lwegwele, umothuko ovela kwi-waxing, ukususwa kweenwele ze-laser, okanye ukwenzakala kwezemidlalo, phakathi kwabanye.
Umzi-mveliso wethu unokwenza isiko lakho, umzekelo, iipakethe zentsimbi ye-2Xgel kunye nemikhono emi-3X, okanye ungazenzela iipakethi zejeli ezi-1X ngemikhono emi-2X, ukuze uzisebenzise kakuhle nangokungaguquguqukiyo.
Iipakethe zejeli zenziwe ngefilimu yebanga lezonyango elingeyityhefu kwaye zihlala zihlengahlengiseka kwaye ziguquguquka xa zinomkhenkce, zibonelela ngentuthuzelo engakumbi yokuba iipakethi zomkhenkce eziqhelekileyo kunye neepakethe zomkhenkce wesibhedlele.
Kungcono ukuwaphosa kwingxowa yesibhedlele.
Ingasetyenziselwa ukukhululeka phantse kulo naliphi na ilungu lomzimba elinemivumbo, ukudumba, ukusika okuncinci kunye nokutsha, iintlungu zemisipha kunye nokuqina, ukukhula kweentlungu, umkhuhlane nasemva kokukhathalelwa lilanga. Ngaba unokutshintsha phakathi kobushushu kunye nonyango olubandayo. Mane ubeke efrijini okanye kwifriji de ubushushu obunqwenelekayo kwisiphumo sokubanda / somkhenkce. Kwisiphumo sokupakisha eshushu, beka ngokulula kwi-microwave kuma-25 okonyusa isibini de kufikelelwe kubushushu obufunekayo.
Ngaba kukho umntu owake wasebenzisa la mva kokubeleka ngeepads zelaphu? Amava?
Ndiyabulela kakhulu ukuba ndibathengele inyanga kwangethuba kuba ndigqibele ukufumana ii-hemmorhoids kwaye ndizidinga ukuze ndiphumle iintlungu ngaphambi kokuba ndibeleke. Ezi ziba ngumkhenkce kakuhle kwaye zigudile xa uzikhupha, zingabinzima kwaye ziqinile okanye zilukhuni.
YITHANDE le mveliso! Ndiphume ekhaya ndibuya esibhedlele nosana lwam oluswiti. Ndinesidanga sesibini sokukrazula kwaye xa ndagoduka bendingakulungelanga konke konke. Ndayalela ezi zinto kuba iipakethi zomkhenkce ezazithunyelwa ekhaya esibhedlele zavuza yonke iphedi yesiqhelo. Ndafaka i-GentlePacks ezintathu kwisikhenkcezisi kwaye zagungqa ngokukhawuleza. Ndizifake kwimikhono ehlambekayo ndiyibeke ngaphandle kwimpahla yam yangaphantsi kwaye iyakhulula iintlungu nokudumba.
Egqithileyo Iphepha leBele leBele
Okulandelayo: Umtya wangasemva kunye nengxowa yomkhenkce
Iipakethe zeNdawo eziMnandi zePostpartum
Iipakethe zepakethi emva kokuzalwa
Iipakethe ze-Ice ze-Engorgement
Ice Pads emva kokukhulelwa
Ipakethi ebandayo engapheliyo
Iipakethi zeP Ice zokuzalwa
Iipakethi ezibandayo zasemva kokubeleka